Hindise cusub oo ku sabsan taagerada wargeysyada iyo wasiirka dhaqanka oo aan ku qanacsaneyn - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
lena Adelsohn Liljeroth, foto: Scanpix
Hindise cusub oo ku sabsan taagerada wargeysyada iyo wasiirka dhaqanka oo aan ku qanacsaneyn
"Taageeada wargeysyada ma ahan arin xaquuqul insaan ah"
La daabacay onsdag 11 september 2013 kl 15.46
Maanta gudiga loo saarey ka soo baarandegida taageerada la siiyo wargeysyada ayaa soo bandhigey hindise ay waddo taageersanyahiin garabyada siiyaasada dalkan Iswiidhen, kaas oo ah in taageerada dowladda siiso wargeysyada yaryarka ah ay halkeeda ka sii socoto. Balse wasiirada dhaqanka Lena Adelsson Liljeroth ayaan ku qanacsaneyn hal wax oo kamid ah hindisahaas: taas oo ah in gudiga doonayo in xataa wargeysyada lidka ku ah demokraatiyada loo sii wado taageerada wargeysyada la siiyo.
- Ma ahan arin xaquuqul insaan ah in qayb laga helo taageerda dowladda ay siiso wargeysyada. Gaar ahaan wargeysyada aan u istaagiin sinaanta dadka oo dhamn, ayey tiri Lena Adelsson Liljeroth.
Gudiga loo saarey ka soo baarandegida taageerada wargeysyada ayaa soo bandhigey hindise ah in dowladda halkeeda ka sii waddo taageerada wargeysyada. Taas oo dhamaan xisbiyada barlamaanka midig ilaa bixid ay wado taageereen. Hindisaha ayaa ku sabsan sidii looga dhigi lahaa taageerda dowladda ee wargeysyada mid cadaalad ah, lana siiyo xataa kuwooda lagu daabaco keliya internetka. Taageeraduna ahaato mid si siman loo siiyo wargeysyada magaalooyink waaweyn ka soo baxa iyo kuwo degmooyinka yaryarka ah ka soo baxa. Halka ay maanta wargeysyada waaweyn helaan taageero dheerad ah. Waxaa sidoo kale kamid ah in canshuurta loo yaqaan moms oo ah boqolkii 6 si siman looga qaado wargeysyada.
Laakiin miyey tahay in wargeysyada ay soo saraan kooxaha naadziga ah in loo sii waddo taagerada dowladda. Haa ayey leeyahiin gudiga arintaan loo saaray. Balse taas waxaa nijab ka muujiyey wasiirada dhaqanka.
- Ma ahan wax la hubo in la siiyo maal dadweyne wargeysyada aan u istaageynin difaacida qiimaha demokraatiyada ayey tiri Liljeroth.
Laakiin Helena Petterson oo xisbiga Socialdemokratiga gudigan ugu mid aheyd ayaan arintaan la qabin wasiirada. Waxeyna leedahey waa arin aan demokraati aheyn in wargeysyada qaarkood la siinin taageerada dowladda.
- Waa arin amni ah oo qiimo ku fadhida oo ah in hayadahada dowliga ahi aysan qaloocin qaynuunka nooyaala oo aysan gacan-gashan oo joojin qaar kamid ah aragtiyada ayey teri.
Arinta ugu muhiimsan hindisaha gudiga aya ah in wargeysyada iyo boostada isku mar la qaybiyo, subaxii aroortii waddanka oo dhan. Taas oo meesha ka saari doonta shirkadaha hada qaybiya wargeysyada. Kuwaas oo maanta wargeysyada qaado 25 000 oo mayl isla wadooyinka boostada la marsiiyo. Midaas oo gudigan u arkey wax aan loo bahneyn.
Hindisaha gudiga ayaa hada la marsiinaya ka soo talo baxinta, kaas oo aan noqon doonin hir-gal ka hor sannadka 2017.
Taageerad dowladda ee wargeysyada waxaa ku baxda lacag dhan nus bilyan karoon. Waqti dheerna waxaa jirey dood ah in gabi ahaanteedba meesha laga saaro.
Helena Peterson oo gudigan xisbiga Socialdemokratiga ugu jirta ayaa waxey leedahey mar hadii xisbiyada oo dhami taageeren hindisahan waxey meesha ka saari doontaa doodii aheyd in la joojiyo taageerada dowladda siiso wargeysyada.
- Sidas ayaan rajeynayaa. Waxaan rajeynayaa in aysan jiri doonin wax hada ka bacdii doodan soo nooleyn kara .